Dowlada Siiriya oo ku hanjabtay inay weerari doonto Isra’iil |
Dowlada Siiriya oo ku hanjabtay inay weerari doonto Isra’iil
Dowlada Siiriya ayaa ku sheegtay weerarka Isra’iil mid qaawan oo ka baxsan shuruucda Caalamka iyo amniga adduunka loogana fadhiyo Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay inuu si deg deg ah u cambaareeyo. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaan weli jawaab ka bixin dacwada ka timid dowlada Siiriya.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa sheegay in Qaramada Midoobay aysan hada awood u lahayn inay si madax banaan u xaqiijiyaan weerarkaasi lagu eedeeyey Isra’iil, halka Xukuumada Isra’iil aysan wax war ah kasoo saarin eedaynmaha uga yimid xukuumada Siiriya.
Xukuumada Siirya ayaa sheegtay inay ay awood uleedahay inay duqeyso gudaha dhulka uu heysto maamulka Isra’iil, isla markaana fulin doonto weerar aar-gudasho ah hadii Golaha Amaanka wax ka qaban waayo weerarkii lagu soo qaaday.
Diyaaradaha dagaalka ayaa habeenimadii Arbacada oo Khamiista soo gelaysay duqeymo la beegsaday gudaha dalka Siiriya, waxaana jiray warar sheegaya inay duqeeyeen diyaaradahaasi gaadiid hub uu siday dhanka wadanka Lubnaan, halka dowlada Siiriya ay sheegtay in diyaaradahaasi ay duqeysay xarun cilmi baaris ah oo ay Militariga Siiriya leeyihiin, xukuumada Siiriya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen 2 qof halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale.